Bethwese iziqu abafundisa ezinkulisa | Eyethu News
Bethwese iziqu abafundisa ezinkulisa
“Uhlelo olusiza abantu abanesipiliyoni ngokuthi bathole izitifiketi.”
Omunye abafundi akade bethola izitifikeyi ngoLwebili. Isithombe : Lethiwe Makhanya
UKUSEBENZA ezinkulisa iminyaka ungenaso isitifiketi okanye iziqu, sekuzoba into abayizwa ngendaba eMgungundlovu njengoba sekuvulwe isikhungo esizobahlola bese sibanika izitifiketi ePlessislaer TVET college.
Lesi sikhungo esethiwe ukuthi i-RPL ( Recognition of Prior Learning) sivulwe ngoLwesibili , sivulwa uNgqongqoshe wezeMfundo ephakeme uDktl Blade Nzimande kwaphinda kwathweswa iziqu abafundi abangu – ekade beqeqeshwa kusona.
Lesi sikhungo sizobhekelela abantu asebesebenze iminyaka emithathu kuya phezulu ezinkulisa (Early childhood development), nesizobathatha sibahlole ngolwazi asebenalo bese sibanikeza iziqu ezingu level 4.
UDklt Nzimande uthe ujabule kakhulu ngalesi sikhungo kanti uyafisa ukuthi kube khona eseminye imikhakha efana nezobunjiniyela.
“ Umlando lona oqophekayo okokuqala ekolishi laseMgungundlovu. Akulungile ukuthi abantu babenesipiliyoni kodwa ingabi khona into ephathekayo ingako lesi sikhungo sizobanikeza izitifiketi. Sizothatha abantu asebeneminyaka emithathu kuya phezulu besebenza bese siyabahlola ukuthi ikuphi asebekufundile sibalekelele lapho ekumele sibalekelele khona ngoba sifuna abantu bakithi babe inezitifiketi. Lesi sikhungo singezinye zezinhlelo ezibaluleke kakhulu emnyangweni wethu,” kusho uNzimande.
UNzimande uphinde wathi uyafisa ukuba isikhungo esifana nalesi sisabalale nakwamanye amakolishi ayisishiyigalombili esifundazweni saKwaZulu Natali.
Uphinde waveza ukuthi bayafisa ukuthi kungagcini ngalesi salomkhakha kuphla kodwa kube khona ezinye ezehlukene okubalwa kuzona nezobunjiniyela.
“Kukhona abantu abaningi la emakhaya asebenesikhathi bekhanda izimoto kanti futhi banesipiliyoni kodwa inkinga abanayo into ephathekayo. Kubalulekile ukuthi sibahlole bese sibanikeza izitfiketi ukuze nabo be zophuma bakwazi ukugcina sebevula amagalaji abo.”
UThishanhloko walesi sikhungo uNkk Shangase uthe bajabule kakhulu ngalesi sikhungo kanti futhi sizosiza umphakathi waseMgungundlovu wonkana ukuba abantu abafundisa ezinkulisa bakwazi ukuthola iziqu.
Owesifazane uqokwe njengowokuqala ukuba ngumqondisi-jikelele eKZN